Nanonona fikambanana 60 ho mpitsikilon’ny “ady mandambolambo” ny minisiteran’ny fitsikilovana ao Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2019 13:52 GMT
Araka ny filazan'ny minisiteran'ny fitsikilovana Iraniana, raisina ho heloka bevava ny fiarahamiasa amin'ny fampahalalam-baovao toy ny Radio Zamaneh, Radio Farda, Radio Israel, BBC sy ny Voice of America.
Ny lisitra koa dia ahitana ny anaran'ny Berkman Center, Ford Foundation, Soros Foundation sy ny Hivos izay manohana ny tetikasa Global Voices sy ny Global Voices Advocacy. Na izany aza, dia efa voaràra ao Iran teo aloha ireo tranonkala roa ireo.
Niteraka fandinihana manerana izao tontolo izao ity hetsika avy amin'ny governemanta Iraniana ity. Marobe ireo fanadihadiana sy tsikera nivoaka tamin'ny gazetiboky, gazety ary fampitam-baovao. Nazava indray fa miezaka manakana ireo hetsika momba ny zon'olombelona ao Iran ny fitondrana Islamika. Hita mazava fa lasa marefo ny governemanta noho ny fahalalahana miteny sy ny demaokrasia.
Araka ny asehon'ny tatitra avy any Iran, nitombo haingana ny tsindry mihatra amin'ireo mpikatroka zon'olombelona, ​ny ​gazety, ireo mpikatroka aterineto sy ny fampitam-baovao. Ankoatra izany, nametraka rivotra mahatsiravina ho an'ny mpianatra, mpampianatra ao amin'ny oniversite ary ny sarangan'ny manam-pahaizana eo amin'ny fiarahamonina ny governemanta.